“Waxaan u wada hadli doonaa sida Wiil iyo Aabihii, mana idin sheegi doono waxa na dhex maray.”.- Sarri oo shaki wayn ka muujiyay Mustaqbalka Hazard – Gool FM
“Waxaan u wada hadli doonaa sida Wiil iyo Aabihii, mana idin sheegi doono waxa na dhex maray.”.- Sarri oo shaki wayn ka muujiyay Mustaqbalka Hazard
(London) 11 Maajo 2019. Tababaraha Chelsea Maurizio Sarri ayaa shaki wayn ka qaba in u soo bixitaankooda Champions League iyo inay taagan yihiin Finalka Europe League aysan ka caawineyn inay sii heystaan xiddigooda Eden Hazard.
Hazard ayaa doonaya inuu u dhaqaaqo Real Madrid oo uu marar badan si shaacsan u sheegay inay tahay kooxdiisa riyada.
Chelsea ayaa waydiisan doonta kooxda reer Spain 112-milyan oo bound si ay uga iibiso Hazard, laakiin Los Blancos ayaa isku dayi doonta inay qiimaha hoos u soo dhigto ilaa 100-milyan oo euro maadaama uu 28-jirka hal sano oo qura uga harsan yahay qanadaraaska uu kula joogo Blues.
Maamulka sare ee Chelsea ayaa ku qasbi kara Hazard inuu sii joogo sanad kale balse waxay khatar u gali doonaan inuu hadhow bilaash kaga tago.
Tan ugu fiican waa in Hazard uu heshiis cusub u saxiixo kooxda reer London taa oo ka dhigi doonta laacibka ugu mushaarka badan kooxda 300,000 oo bound usbuuciiba.
Yeelkeede, Sarri ma aaminsana in guulihii ugu dambeeyay sida inay u soo bexeen Champions League iyo inay taagan yihiin Finalka Europe League aysan ka caawineyn inay ceshtaan Hazard.
“Ma garanayo. Haddii uu Hazard ku fikirayo inay dhammaatay taariikhda halkan, intaa kaddib maskax ahaantiisa way soo idlaatay, waan isku dayi karaa inaan la hadlo isaga balse mid sahlan ma ahan, dabcan waan doonayaa Hazard,” Sarri ayaa sidaa yiri.
“Sidaad ka warqabtaan waa inaad kooxda waydiisaan midaa waayo anigu ma xukumo suuqa. Aniga masuul kama ihi heshiis cusbooneysiinta ciyaartoyda sidaa darteed ma awoodo inaan ka jawaabo su’aashan. Waxa kaliya oo aan sameyn karo waa inaan Hazard ula hadlo sida aabihii oo kale ma ahan sida Tababare oo kale.
“Haddii aan la hadlo isaga, idinma sheegi doono wixii na dhex maray waayo waa wada hadal u dhexeeya wiil iyo aabihii.”.
"Waan iska Ooyaa markasta aan dib u daawado kulankii aan ka adkaanay Ajax waayo....".- Lucas Moura